#ကျင့်ဖို့အတွက် ဖတ်မိပါစေ – မြေဇင်း သမထဝိပဿနာ
ဆရာသမား ပြောသည် က ငါ့တပည့် ရယ်… စာသိ ဆိုတာ ကိုယ် ကျင့်မယ့် တရား ကို သိတာ က ပိုကောင်းပါတယ် တဲ့….ထို့ နည်းအတူ ဆရာတော် ဘုရားကြီး တပါး ကလည်း ဒလိုလေး ပြောပါ သည်… ကွယ်.. တဲ့.. စာအုပ်တအုပ်ကို ဖတ်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကို သူများ ကို ပြန်ပြော ပြဖို့ ဆိုတဲ့ အတွေး နဲ့ မဖတ်ပါနဲ့…တဲ့… မိမိကိုယ်တိုင် လိုက်နာ ကျင့်သုံးဖို့ အ တွက် ဖတ်ပါလေ…တဲ့ အကယ်၍ မိမိမှာ ဖတ် စရာတွေကအရမ်းများ နေရင် အရေး ကြီးဆုံး စာ အုပ်ကို အရင် ဦးဆုံး ဖတ်လိုက် ပါ…တဲ့..ဘာလို့ လဲဆိုတော့… နောက်တခါ ဖတ်ခွင့် ရဖို့ မသေချာ လို့ပါ…. တဲ့…ဒီ စကားတွေ နာကြား ပြီးထဲ က စာရေးသူက နောက်ပိုင်း မိမိ ကျင့်မယ့် စာအုပ် ကို ရွေးဖတ် ခဲ့ပါ တယ်…တကယ် လဲ မှန်လိုက် တာ.. ကိုက ဗဟုသုတ ဖြစ် ရုံပဲ ဖတ်လိုက် တဲ့ စာက မကျင့် ကြည့် တဲ့ အခါ ဖတ်ရင်း သံသယ တွေဝင် လာပါ တယ်…အော်… ဒါမို့ မြတ်စွာဘုရား က စိန္တာမယ ၊သုတမယ နဲ့ ဘာဝနာမယ လို့ ဉာဏ် ၃ ဉာဏ် ဟောထား ခဲ့တာ ပါလား….အေး…. ငါက အပေါ် ၂ဉာဏ်မှာ သောင်တင်ပြီး ဘာဝနာမယ ဉာဏ်ကျတော့ အားမထုတ်ဖြစ်ခဲ့တာပါလား…။
ဒါမို့ ငါက စာတွေပိ စာတွေ သိပေမယ့် ဘာ အသိ ဘာဉာဏ် မှ မရဘဲ သံသယ တွေကြီးထွားလာ ခဲ့ရ တာပါ….လားအော်… အေး… ဒါမို့ ဆရာသမား များက ပြောတာ တယ်လည်း မှန်တာ ပါလား နော်….ကျင့်ဖို့အတွက် ဖတ်တဲ့စာဆို ကျင့်ကြည့်လိုက်ရင် စာထဲ ပါနေတာနဲ့ ကိုက်မကိုက် ညှိလို့ရ နေပြီကော…အော်…အော်..ငါရယ်..ဒါတွေ အသိနောက်ကျခဲ့တာပါလားနော်… ဒလို ခံစားမိ လိုက် တဲ့အချိန်မှာပဲ တရားတွေကို လက်တွေ့ကျင့် ကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ…အား…ပါး…ပါး… မြတ်စွာ ဘုရား ကို ကျေးဇူး တင်တဲ့ စိတ်တွေ တဖွားဖွား ဖြစ်တာ ပါလားနော်…ကျန်း…. ဘုရား.. ဘုရား… တကယ်ကို စာထဲက ဂုဏ်တော်တွေနဲ့ အကုန်ပြည့်စုံနေတာပါလား ဆိုတာ.. ရိပ်မိ သွားခဲ့ တယ်… ဘုရားသာမဟောခဲ့ရင် ကြည့်စမ်းပါဦး… ငါ့ဖာသာ ငါသာဆို ဒါတွေ ဘယ်သိနိုင်ပါ့မလဲ..။
သိပ် ကျေးဇူး တင်ဖို့ ကောင်းတဲ့အပြင် အကြိမ်ကြိမ် ကြည်ညိုလို့မဆုံးကိုဖြစ်ရပါတယ်…အော်… တရားကို မြင်မှ ဘုရားကို မြင်တယ် ဆိုတာ… ငါသဘော ပေါက်သွားပြီ… ပေါက်သွားပြီ.. ကျင့်ဖို့ အတွက် ဖတ်ပါ.ဖတ်ပြီးရင်လည်းကျင့်ပါ.မြတ်ဗုဒ္ဓက ငါဘုရားပြောတာတောင် မယုံပါနဲ့ဦးဟေ့… မိမိတို့ ဖာသာ ကျင့်ကြည့် ပြီးမှ ဟုတ်မဟုတ် မှန်မမှန် လက်ခံပါ…. တဲ့…ဒါမို့ ကျင့်ကြည့် ပြီးမှ စာ ပြန်ဖတ်ကြည့်ရင် အကုန်မှန်နေတာတွေ့ရလို့ အင်မတန် ကျေနပ်နေပါလိမ့်မယ်…ဖတ်တဲ့ အတိုင်း ကျင့်နိုင်ကြပါစေ အဆွေတော်တို့..ယောဂီ အားလုံးတရားတွေ့ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်